OweGenerations uphefumule okokuqala ngqa ngesigameko | News24
OweGenerations uphefumule okokuqala ngqa ngesigameko
Johannesburg - Odlala phambili kumdlalo wakumabonakude iGenerations: The Legacy uRapulana Seiphemo odala indawo kaTau uphefumule okokuqala ngqa kulandela ingozi eyenzeka ezinyangeni ezimbalwa ezedlule.
URapulana ubhele enkundleni yezokuxhumana i-Instagram ebonga abalandeli ngokumeseka esesikhathini esinzima.
OLUNYE UDABA: Osolwa ngokuduna 'uTau' ukhala ngokuhlukunyezwa ngojele
"Njengoba nazi nonke ukuthi ngabandakanyeka engozini eyayinyantisa igazi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Ngiyelulama manje kanti bengingeke ngenxa yemithandazo yenu: abalandeli, umndeni nabangani," kubhala uRapulana.
AbeGenerations The Legacy badalule ukuthi uRapulana uzobuyela kulo mdlalo maduze bazwakalisa nokubonga kubalandeli esitatimedneni.
URapulana wabandakanyeka engozini ku-N14 eduzane naseDiepsloot ngomhlaka-14 Febhuwari.
Kubikw aukuthi uRapulana wahluleka ukulawula imoto yakhe yohlobo lwe-Audi A4 lapho kwadlula khona imiphefumulo emithathu, kubika iSunday World.